အသိပေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (Awareness Raising Seminar) | Local Resources Centre
အသိပေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (Awareness Raising Seminar)
Khaing Pwint Aung Wednesday, April 3rd, 2019
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့ရှိ ထားဝယ်ဟိုတယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အသိပေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကို အစိုးရဌာနဆိုင် ရာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ကောင်းသောပြောင်း လဲမှုကို ဖော်ဆောင်သူများ(Change Agents)အကြားပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။
“ဒီအစီအစဉ်လေးက အရမ်းကောင်းတယ်၊ လုပ်သင့်တယ်၊ MNHRCရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို ရှင်းလင်း စွာ သိရသလို၊ MNHRC နဲ့ အရပ်ဖက်တွေကြား ပေါင်းကူးပေးတဲ့ အစီအစဉ်လေးတခုဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လို ပေါင်းစည်းစေမယ့် လမ်းစဖြစ်စေတယ်” လို့ ထားဝယ်အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မာလာက ဆိုပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးလှထွေးမှ အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြေားကြားခဲ့ပါသည်။
အသိပေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတက်ရောက်လာသေ မေတ္တာလက်ကမ်းအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာ ဦးအာကာဦးမှ “ ဒီဆွေး နွေးပွဲက အကျိုးရှိပါတယ်၊ တက်ရောက်လာသူအချင်းချင်းလည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတခုသလို မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ကောင်းတခုရရှိနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါ တယ်”။
အသိပေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ လုပ်ဆောင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကို ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင် ထာဝယ်ရုံး ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါ်ဖြူစင်က အခုလို “မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန်၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်နေသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များ အကြား တနင်္သာရီရှိ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေနှင့် စိန်ခေါ်မှုများဖလှယ်နိုင်ရန်နှင့် နောက်ပိုင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု လမ်းကြောင်းများရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်”။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအကာဟိန်းစိုးမှ မြန်မာ နိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အကြောင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးမှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများ၊ တိုင်ကြားနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ၊ တိုင်ကြားစာများအကြောင်းကို အသေး စိတ်ရှင်းလင်းပေးသွားခဲ့သည်။ တက်ရောက်လာသူများ ထပ်မံသိလိုသည့်အချက် မေးမြန်းမှုများကိုလည်း ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင်မောင် မှရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ ဒေါ်သူဇာအောင်က “လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေတွေကို တာဝန်ရှိသူများထံ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခွင့်ရရှိတဲ့အတွက် အရမ်းကျေနပ်မိတယ်”လို့ ဆိုပါသည်။
အားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အရေးစီမံကိန်းသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုဖြင့် ညီမျှခြင်း မြန်မာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် DCA NCA အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်း ဖြစ်ပါသည်။
An awareness raising seminar among local authorities, Myanmar National Human Rights Commission, civil society organisations and change agents was held at Dawei hotel, in Dawei, Taninthayi region.
“This program is very useful and should be held. We were well aware of the role and responsibility of Myanmar National Human Rights Commission. As this is an activity that givesaspace for dealing with between MNHRC and civil society organisations. So, this isafirst step how to integrate among them.” said Daw Mar Lar( Dawei Women Union – General Secretary).
U Hla Swe, Minister for Natural Resource and Environmental Conservation of Taninthayi region, delivered an opening speech.
U Arr Kar, director of Metta Latt Kan said, “The event is effective. We can make networking among the participants. It is helpful as we can link with MNHRC for further communication.”
Daw Phyu Sin, Dawei Regional Coordinator said,” The purpose of the activity is to have better understanding the role and actions of Myanmar National Human Rights Commission, to exchange human rights situation and challenges among Hluttaw representatives and civil society organisations working on human rights and to get networking for further collaboration.”
U Arr Kar Hein Soe,aDeputy Director of Myanmar National Human Rights Commission explained the information in detail with regard to the role of MNHRC, human rights education programs, the situation of handling human rights violation, the ways of how to complain and complaints mechanism. And then, he answered the questions of the attendees.
U Maung Maung, assistant director of department of social welfare explained current activities.
Daw Thuzar Aung,ahuman rights defender said, “I am pleased to report the situation of human rights violation to the responsible persons directly.”
Rights for All is being implemented by Equality Myanmar,Local Resource Centre and DCA-NCA with the fund of the European Union.